Dr. Cabdi Aw Daahir Cali oo Burco u jooga mashruuc seera. | Salaan Media
Burco (SM):Wasiirka Xanaanadda Xoolaha Somaliland Dr. Cabdi Aw Daahir Cali ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer, waxaanu sheegay in u jeedada safarkaasi ay tahay in uu dhagax-dhigidoono mashruuc seera ah oo ay magaaladaBurco ka hirgalinayaan.
Somaliland Dr. Cabdi Aw Daahir Cali, waxa uu sheegay in uu kormeer ku soo mari doono deegaamo ka tirsan gobolka Togdheer kaasi oo uu ugu kuur geli doono xaalada guud ee xoolaha ku nool gobolkaasi isla markaana uu dhagax dhigi doono mashaariic kala duwan oo gobolkaasi laga hirgelinayo.
Isaga oo arrimahaas ka ahdlayana waxa uu yidhi “Marka labaad waxaan doonayaa in aan maalinta Barito ,Dhagax-dhigo mashruuca Seero xoolaad ah ,oo miisaaniyada sanadkan ku jira oo aanu ku seerayno Seeraha Banaanka Aroori ee magaalada Burco si ay hadhawto xiliga abaaraha xooluhu ugu baxsadaan ,kaasi oo cabirkiisu dhanyahay 600- Lix-boqol-oo-Mitir ,waxaanu mashruucani qayb ka yahay mashaariico ay noo qorshaysantahay in aanu ku Seero dhulalkii hore ee xooluhu ku baxsan-jireen xiliyada abaaraha. Marka hore waxaan doonayaa in aan kormeer ku tago deegaamada gobolka Togdheer ,si aanu wasaarad ahaan u ogaano xaalada guud ee Xoolaha nool ee gobolku ku suganyihiin wakhtigan iyo dadka Xoolo dhaqatada ahiba Marka hore waxaan doonayaa in aan kormeer ku tago deegaamada gobolka Togdheer ,si aanu wasaarad ahaan u ogaano xaalada guud ee Xoolaha nool ee gobolku ku suganyihiin wakhtigan iyo dadka Xoolo dhaqatada ahiba”.
Dr. Cabdi Aw Daahir Cali, waxa kale oo uu beeniyay warar sheegayay in seeraha gobolka Togdheer nin ganacsade ah loo xidhayo, waxaanu yidhi “Waxaan halkan ka cadaynayaa in aaney habayaraatee wax alaale wax ka jiraa jirin wararka magaalada la galiyay ee sheegaaya Seeraha Xoolaha gobolka Togdheer ee Aroori in aanu Xukuumad’ahaan u xidhayno Shirkado gaar’ah ,shicibka xoolo dhaqatada ah ee deegaamadaasi ku dhaqana waxaan ku wargalinayaa in Seerahan xoolahadooda loo xidhaayo”.